Incwadi Yesikhalazo ye-Amazon, i-Akhawunti Yomthengisi Imisiwe, Uhlelo Lokusebenza
Umxhumanisi Wakho Wokukhalaza we-Amazon
Ungayibhala Kanjani Incwadi Ephumelelayo Yokudlulisa Izikhalazo e-Amazon kanye noHlelo Lokusebenza?
Mane uqale ingxoxo ebukhoma nathi manje noma ugcwalise ifomu lokubuza eliku-inthanethi ngezansi nemininingwane yakho bese kuthi umxhumanisi wethu abuye ehoreni. Xhumana nathi ukuthola incwadi ephelele yokuDluliswa kwesikhalazo ye-Amazon.
Buka Imisebenzi Yethu
Qonda ukuthi kungani i-akhawunti yomthengisi ye-Amazon imisiwe!
Ukwazi imbangela yokumiswa kwe-akhawunti yisinyathelo sokuqala ekwenzeni i-akhawunti iqalwe kabusha. Ukuthola inkinga kudinga ulwazi lochwepheshe ngenkambu. Ochwepheshe be-akhawunti yethu yoMthengisi bazokusiza ekutholeni imbangela yokumiswa kwakho futhi bachaze ukuthi singakusiza kanjani ukubhala okuphelele Incwadi Yesikhalazo ye-Amazon. Xhumana nathi manje futhi uthole Isikhalazo sakho ASAP.
Sisebenza amahora angu-24 ngosuku, izinsuku eziyi-7 ngeviki.
Bhuka ukubonisana kwamahhala
Ababonisi Bazobuya Ehoreni eli-1
Ngingakuvimba kanjani lokhu kumiswa kungenzeki ngokuzayo?
Udinga ukucabangisisa ngakho ukuthi uzokuvimbela kanjani lokhu ukuthi kungenzeki futhi ngokuzayo. I-Amazon izolindela ukuthi kufanele usebenzise noma yiziphi izinhlelo ezizokwenziwa futhi kwesinye isikhathi zizobuyisela i-akhawunti yakho yomthengisi ye-Amazon uma nje ungakhombisa ukuthi ulufezile uhlelo lwakho lomsebenzi.
Uma udinga usizo lokukhanga i-akhawunti yakho yomthengisi ye-Amazon, noma ngakolunye uhlangothi uma ungathanda ukubona ukuthi yiziphi izingqinamba zokubuyiselwa kwakho, singasiza. Khuluma nomunye wabamele bethu ukuzwa ukubonisana kwamahhala nombono wochwepheshe ngecala lakho.
Futhi singakusiza ukuthi ufake isikhalazo uma ngabe ukufakwa kwakho kuhlu kungasebenzi futhi uma kwenzeka kwephulwa inqubomgomo engathinta impilo ye-akhawunti yakho! Xoxa nomunye wabamele ukunakekelwa kwamakhasimende ethu ukuze uthole ukubonisana kwamahhala.
thola i-Akhawunti yakho ye-Amazon emisiwe ibuyiselwe kungakapheli amahora angama-24
Ngenkathi kuthatha isikhashana ukuthi i-akhawunti yakho yomthengisi ye-amazon imiswe okwesikhashana, ukubuyiselwa kwe-akhawunti kungaba inqubo echitha isikhathi. Kwesinye isikhathi, lesi sikhathi sinwetshelwa ngenxa yamaphutha athile lapha nalaphaya enziwa ngumthengisi ngenxa yezizathu ezahlukahlukene njengokungacaci kuzinqubomgomo ze-Amazon, ukungakwazi ukuthola inkinga ngemuva Ukumiswa kwe-akhawunti ye-Amazon, noma ukungakwazi ukubhala incwadi ecacile yokunqamula isimangalo nokumiswa kochwepheshe e-Amazon. Siziqonda kangcono lezi zinkinga kunanoma ngubani futhi yingakho siqinisekisa insizakalo esezingeni eliphakeme ngesikhathi esisheshayo.
I-Aplus Global eCommerce yisixazululo sokumiswa okulodwa sokuxazululwa okugcwele kwezidingo zakho zokudlulisa izikhalazo nokuningi. Isikhathi singasuka emahoreni angama-24 siye emahoreni angama-72 ngokuya ngobunzima benkinga.
Ngikususa kanjani ukukhipha imali i-akhawunti yami ye-Amazon?
Ukuqasha umuntu kufanelekile kepha ungasinaka isaziso esithunyelwe yi-Amazon, bese uqhamuka necebo lokusebenza. Lezi yizithako eziyinhloko zesikhalazo esisezingeni elifanele.
Kuthatha isikhathi esingakanani ukubhala incwadi yesikhalo sokumiswa?
Isikhathi esifushane kakhulu esidingekayo ukubhala isikhalazo amahora angama-24. Lesi sikhathi singakhuphukela ezinsukwini zebhizinisi eziyi-3-4 njengemininingwane ye-akhawunti ethile emisiwe ye-amazon kanye nohlobo lwensizakalo olucelwe ngumthengisi.
Yini ongayenza ukubuyisela i-akhawunti yami yomthengisi ye-Amazon?
Kunezinsizakalo ezahlukahlukene namaphakeji esiwanikezayo ukubuyisela i-akhawunti yomthengisi ye-Amazon. Sinikeza ukubonisana, ukuhanjiswa kwencwadi yesikhalazo ye-amazon kanye nezinsizakalo zokulandelela; kuya ngohlobo lwephakeji oyikhethayo.
Ngabe usuvele wasebenza kumacala wokumiswa kwe-Amazon Seller?
Yebo, sisebenze nenqwaba yamacala ahlukene ahlobene ne- Ukumiswa kwe-Akhawunti ye-Amazon. Futhi, sineqembu lomakadebona abavela kulo mkhakha.
Kuthiwani uma i-Amazon icela imininingwane engaphezulu?
Isikhalazo sisisingatha size sifinyelele enhlosweni yaso- lokho ukubuyiselwa. Ngemuva kokukukhokhisa kanye, sisebenza esinyathelweni ngasinye senqubo kuze kube zonke izinkinga zixazululiwe.
Ngabe ukubuyiselwa kwe-akhawunti kuqinisekisiwe?
thina, njengozakwethu, sinikeza ukuhlaziywa okuhle nesikhalazo sokubuyiselwa kwe-akhawunti yomthengisi ye-amazon emisiwe. Asikwazi, noma kunjalo, ukulawula izinto ezivela ekugcineni kwe-Amazon futhi ukubuyiselwa kwe-akhawunti akuqinisekisiwe nge-100%. Kodwa-ke, sigcine izinga lokuphumelela elingaphezu kwama-98% kuze kube manje.
Ngabe sinikeza isiqinisekiso sokubuyiselwa imali?
Empeleni asijabuleli ukubuyiselwa imali okwamanje kungaba nemibandela yenoveli lapho siyicabanga khona. Ngemininingwane engaphezulu funda izinqubomgomo zethu zokubuyiselwa imali.
Lithini izinga lakho lokuphumelela maqondana ne-Amazon Appeal Service?
Ngokujabulisayo, Kuze kube manje sigcine izinga lokuphumelela liphakeme noma lilingana no-98%. Besilokhu senza kahle futhi sinezinga lokugcinwa kwamakhasimende elingu-90% ngenxa yokwaneliseka kwamakhasimende.
Incwadi Yesikhalazo ye-Aplus Global Amazon
I-01: I-11 13 Jun 21
I-akhawunti yami yomthengisi ye-Amazon ivaliwe, ngakho-ke ngathinta i-A Plus Global Amazon ukungisiza ngibhale uhlelo lwezenzo ukunxenxa ukwenziwa kungasebenzi.... ngazenzela i-akhawunti yami ngabhekana nezingqinamba ezithile ebengibhekene nazo ngaphambi kokuthi ngiyeke ukusebenza.Ngako konke, okuhlangenwe nakho okuhle kakhulu, babephendula futhi bangihambisa ngenqubo yokwenza i-akhawunti yami ivuselelwe.Ngisanda kuvulwa ezinsukwini ezimbili ezidlule! Ngakho-ke izinsizakalo zabo ziyasebenza nakanjani!Funda kabanzi
I-01: I-00 13 Jun 21
Ngemuva kokuqhamuka nesikhalazo sami, ngithumela i-4-5 POA futhi anginayo inhlanhla. Bengicabanga ngokoqobo ngokwenza i-akhawunti entsha ye-Amazon ngoba bengingakwazi ukubuyisa i-akhawunti yami. Yazi, ngisenayo imali ekhiyiwe... phezulu ne-Amazon futhi bebengeke baphendule kunoma yiziphi izikhalazo zami. (nge-imeyili ethi, "Singahle singaphenduli kuma-imeyili aqhubekayo ngalolu daba"). Ngemuva kwalokho, ngithole isincomo kothile osebenzise le nkampani nginqume ukuhamba nabo. Ngazifaka engcupheni ngathi mhlawumbe ngiyabakhokhela bese ngithola i-akhawunti yami isebenza futhi ngibuye nezimali zami noma ngiyazikhokha bese ngilahlekelwa yimali bese ngilahlekelwa yi-akhawunti yami enezimali. Ngemuva kwezinyanga ezimbili ngimisiwe ngakhokha lokhu inkampani ukungisiza ngibuyise i-akhawunti yami. Bafaka i-POA ngokoqobo futhi ngakusasa ngathola i-imeyili ethi "I-akhawunti yakho ye-Amazon manje isiyasebenza kabusha" Umsebenzi owenziwe kahle futhi nakanjani NGINCONYA i-Aplus Global! Uma ufuna i-akhawunti yakho ibuyiselwe noma ivuselelwe, ungalenzi iphutha elifanayo wenze. Thola uchwepheshe ukuze akubhalele i-POA.Funda kabanzi
Bakulungele abakwenzayo. Ngibasebenzisile ukusiza ukwenza i-akhawunti yami yomthengisi ye-Amazon ivuselelwe, futhi kuthathe isikhashana, kepha abayeki kwi-akhawunti. Bangibhalela izikhalazo ngaze ngaba... ivuselelwe. Ukwenza kabusha kwami ​​kuthathe cishe izinyanga ezi-2 nohhafu, kepha nginomngani osebenzise le nsizakalo futhi futhi wabuyisa i-akhawunti yakhe ezinsukwini ezimbalwa nje. Ncoma kakhulu!Funda kabanzi
Ngijabule kakhulu ukusebenza nabo. Insiza eshesha kakhulu nencwadi yabo yesikhalazo iyamangalisa. Laba bantu bayazi ukuthi i-amazon ifunani. Ngiyabonga!!
Ngisebenze nale nkampani ama-akhawunti angaphezu kwe-100 futhi babuyisela iningi labo. Zizinhle kakhulu izinsizakalo zencwadi yokudlulisa izikhalazo ngamafuphi. Ngizoqhubeka nokusebenza nabo.
Sawubona! Ngifuna ukukutshela: I-akhawunti yami ivuselelwe! Ngiyabonga kakhulu ngosizo lwakho! Ngizokukhumbula.
19:24 17 Ephreli 21
Okuhamba phambili ebhizinisini. Ngemuva kokuqasha insizakalo yabo nokubheka abakwenzele i-akhawunti yami. Mangisho ukuthi ngikholelwa ukuthi ayikho into abangakwazi ukuyixazulula. Bancome kunoma ngubani onenkinga nge-... i-akhawunti yomthengisi. Abenzi besenzo esheshayo nemiphumela esheshayo ngokweqile!Funda kabanzi
23:34 09 Ephreli 21
Ngingayincoma le nkampani ukuthi ibhale noma iziphi izincwadi ze-Amazon Appeal njengoba bazi ukuthi i-Amazon ifunani. Ngenze ucwaningo kwezinye izinkampani ngabe sengikhetha lena ngoba benza isikhathi sokukhuluma nami... mayelana ne-akhawunti yami. Bengicabanga ukuthi kuzofanele ngilinde izinsuku ezingama-90 + kanye nezinsuku ukuze ngikhishwe imali futhi i-akhawunti yami imiswe ngokuphelele. Ngiyabonga APlusGlobal ngokubhala incwadi yami yesikhalazo ngokushesha nangobungcweti. Ngiphakamisa kakhulu ukuqasha uchwepheshe okokuqala lapho udlulisa icala lakho. Le nkampani yangisiza ukuthi i-akhawunti yami ivuselelwe ngosuku olufanayo lapho ngafaka isikhalazo nge-akhawunti yami ngencwadi yabo yokudlulisa icala. Okwenzelwe ubuwena ecaleni lami. Siyabonga ngomsebenzi omuhle!Funda kabanzi
Abantu @ APlus Global Ecommerce bahle ngempela futhi bayasiza. Uthole ukuhlolwa kwe-akhawunti okugcwele futhi uthole nokuqonda okukhulu kubo mayelana nezinguquko okudingeka zenziwe. Futhi qagela ukuthi yini, it... kuthuthukise nokuthengisa kwamiFunda kabanzi
I-APlus Global Ecommerce ingumhlinzeki wesevisi omuhle wenkonzo yokufaka isikhalazo ye-Amazon. Ngibuyisele i-akhawunti yami kungakapheli amahora angama-72 kuvinjelwe.
I-APlus Global Ecommerce Ithunyelwe emahoreni ama-2 futhi yabuyiselwa yi-Amazon khona manjalo. Impela okungcono kakhulu. Kufanele wonke amasenti. Engikweluleka ngakho ukuthi ungabheki umaki wentengo uma ufuna imiphumela.Umsebenzi wakhe ulungile... iphelele. Ngemuva kokuthenga ukuxhumana kushesha, benginombhalo kungakapheli amahora ama-2 futhi i-acoount ikhishwe ngaphansi kwamahora angama-24. Ngivale i-akhawunti isikhathi esingaphezu kwezinyanga ezi-5. Ngiyincoma kakhulu.Funda kabanzi
Ngithole ukuthi i-akhawunti yami ibuyiselwe ngaphansi kwamahora angama-24, ngizomncoma kunoma ngubani, ngiyeke ukukhokhela abantu ngokweqile bese ngihamba nezinyo lendlovu hes the best ekwenzeni izikhalazo! Ngibonga kakhulu